Izindawo ezi-7 ezinhle kakhulu e-Italy | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Ukuphunyuka eYurophu, General, Italia
Nini sicabanga nge-Italy sivamise ukuyixhuma neRoma khona manjalo, futhi impela idolobha elihle impela. Kepha kunokuningi ongakubona. Empeleni izindawo eziyi-10 kuphela ezimbalwa, ngoba i-Italy igcwele amakhona amnandi, izindawo ezinomlando namadolobha amahle, kepha kufanele uqale ngokuthile, ngakho-ke sikwenzela lolu hlu olubalulekile.
Lezi yizo Izindawo ezingu-7 e-Italy ukuthi kufanele sibone ngaphambi kwanoma yini enye. Sinezindawo ezinezikhumbuzo, amadolobha asemanzini, amadolobha asogwini nokunye okuningi. Ungaphuthelwa yilokhu kukhethwa okuhle kwezindawo uma ucabanga ukuthuthukisa i-Italian yakho, ngoba bonke banokuthile okuthakazelisayo okungasenza sihlale futhi sihlale kule ndawo.
1 Umlando waseRoma
2 Ukuthandana kweVenice
3 Ubuciko bukaFlorence
4 Ukuthambekela kwePisa
5 Iphupho eCinque Terre
6 Amaholide we-Capri
7 Idolobha elingcwatshwe ePompeii
Ongakusho ngeRoma esingakazi okwamanje, futhi kwaziwa njenge uMuzi Ongunaphakade ' ngoba kubonakala sengathi isikhathi asidlulanga kuwo amakhulu amaningi eminyaka. Izikhumbuzo eziningi zoMbuso WaseRoma zisamile, njengeColosseum edumile, ukuvakasha kwayo okubaluleke kakhulu. Kepha ngaphezu kweColosseum sinomthombo odumile iTrevi lapho singenza khona izifiso, singavakashela iPantheon yase-Agrippa ngodonga lwayo olukhulu noma sivakashele iRoman Forum ebuyela emuva ngesikhathi.
EVenice, elinye lamadolobha athandana kakhulu emhlabeni lisilindele, futhi lingelinye lamadolobha okuqala, ngoba lisemanzini. I-gondola igibela emigwaqweni yayo nasezindaweni ezaziwa kakhulu yinto okungafanele iphuthelwe. I- Ibhuloho iRialto Ingenye yezindala kunazo zonke ewela imisele, futhi ngokungangabazeki futhi ingenye yezidume kakhulu, ngakho-ke ukudlula kuyo nakho kufanele. Ngakolunye uhlangothi, ungakhohlwa ukuvakashela iSan Marcos Square, uletha ama-wellies uma kugcwele amanzi. Kuyo sizothola isigodlo esidumile saseDucal kanye neBasilica enhle yaseSan Marcos. Emzileni singama futhi nakwezinye izakhiwo eziyizifanekiselo zedolobha okwamanje ezineminyuziyamu.
IFlorence idolobha elifanele abathandi bobuciko, futhi kungukuthi kulo singabona izinkulungwane zamatshe ezikhumbuzo nemisebenzi yabadwebi abanjengo UMichelangelo noma uGiotto. Uma siqala ePiazza del Duomo sizobe sesivele sikwenye yezindawo ezinamatshe esikhumbuzo amaningi okufanele siwabone, ngoba yiCathedral noma iDuomo, iCampanille neBattistero. Enye indawo zonke izivakashi ezifuna ukuyibona yiPonte Vecchio, enezindlu zayo ezidumile ezilenga nezingcweti nezitolo ngaphakathi. Elinye lebhuloho elikhetheke kakhulu emhlabeni, nebhuloho lamatshe elidala kunawo wonke kulo lonke elaseYurophu.
IPisa idume nge- encike kuMbhoshongo, futhi futhi inezikhumbuzo ezinesitayela esikhethekile, isitayela sePisan, esiRomanesque esichazwe kabusha ngamaPisans. Ukuvakashela ePisa akuthathi isikhathi esingaphezu kosuku, futhi into ethakazelisa kakhulu iseduze kombhoshongo wasePisa, okufanele ukhuphuke kuwo ukuze ujabulele imibono yawo. Eceleni kwayo kukhona iDuomo neBaptistery.
Iphupho eCinque Terre
ICinque Terre iyi- indawo enamadolobha amahlanu: IVernazza, iCorniglia, iMonterosso al Mare, iRiomaggiore neManarola. Ngenxa yokwanda kwenani lezivakashi, iziphathimandla zicabanga ukulawula ezokuvakasha nokunciphisa inani lokuvakasha ngonyaka. ECinque Terre sithola amadolobhana amahle asogwini abonakala sengathi amisiwe emaweni, anezindlu ezimibalabala ezikwenza ubonakale uphupha kakhulu. Kepha futhi iyindawo enenani elikhulu lemvelo elinemizila eminingi yokuhamba izintaba ethokozisayo.
ICapri yayivele inezikhathi zamaRoma isiqhingi ukuze ehlobo isigaba esiphakeme, njengoba kunezinsalela zezindlu zamaRoma. Ngekhulu le-XNUMX kwaba yindawo kanokusho ehlobo futhi. Ukuvakashela iCapri ukubona enye yalezo zindawo zigcwele ubuhle nobuhle base-Italy. Indawo lapho singathokozela khona amabhishi aso kanye nogu, kanye nemibono ekhuphuka kumngcwabo wesiqhingi.
Idolobha elingcwatshwe ePompeii
Wonke umuntu uzokwazi ngendaba yasePompeii, idolobha lasendulo lelo wangcwatshwa ngaphansi kokuqhuma kweVesuvius, ngo-AD 79. Sengcwatshwe ngendlela engazelelwe, idolobha lahlala linjengoba linjalo, futhi nokuma kwezidumbu zabanye abahlala kulo, kumangazwe ukuqhuma kwalokhu, kuyagcinwa. Leli dolobha lisesimweni esihle sokongiwa kwemvelo ngakho-ke lisinikeza umbono wokuthi babephila kanjani ngaleso sikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izindawo ezi-7 ezinhle kakhulu e-Italy
I-Chinese gastronomy, izitayela eziyisishiyagalombili ezihlwabusayo
ICanberra, inhlokodolobha yase-Australia